Zvakakosha zveRakanaka Virtual Reality Vhidhiyo - NewGenApps
newgenapps, zvigadzirwa zvetekinoroji, zvigadzirwa zvetekinoroji, Virtual Reality, Virtual Reality, VR maapp
Zvakakosha zveiyo Yakanaka Virtual Reality Vhidhiyo
VR kana Virtual Reality rave kufarirwa zvikuru mazuva ano. Munhu wega wega anoziva izvo a rakapotsa chokwadi zvirizvo! Asi usazvidya moyo kana iwe usingazive chero chinhu nezve ino temu. Ichi chinyorwa chinonyanya kune avo vanhu vanoda kudzidza nezveVR uye vanoda kuziva kuti yakanaka vhidhiyo yeVR inowanikwa sei. Kutamba, mafirimu, mifananidzo zvese zvinosanganisira rakapotsa chokwadi mazuva ano. Asi hapana munhu ane hanya kuti vhidhiyo yeVR inogadzirwa sei. Pane matanho mashoma anozoda mimwe michina yekuita vhidhiyo yakakura yeVR.
izwi rakapotsa chokwadi inouya zvoga kubva pazita rayo uye tsananguro ye 'chaiyo' uye 'Reality'. Virtual inogona kutsanangurwa se 'padhuze' kana 'kuvharirwa' uye Reality inogona kutsanangurwa se 'chiitiko kana mamiriro ezvinhu ariko chaizvo'. Kuvasanganisa pamwe chete rakapotsa chokwadi tsananguro dzinove 'dzakavharwa kune chaicho' kana 'hunenge hupenyu chaihwo'. Virtual chokwadi inogona kurehwa chero chinhu, kazhinji, inotsanangurwa kurudzi rwechokwadi chekutevedzera. Zvese zvatinonzwa nekubata chikamu che sensory system. In rakapotsa chokwadi, tinonzwa pfungwa dzakafanana uye tinopa ruzivo kuuropi uye kuita maererano. Huropi hweMunhu hwekugadzira pfungwa inoita kuti inzwe sekunge isu tiri munyika chaiyo. Muchidimbu, pfungwa dzedu dzinogonawo kunge dziripo munyika chaiyo.
Chii chinonzi Virtual Reality?
Yechokwadi chaiyo mune yehunyanzvi izwi zvinogona kuva nyore kutsanangura. Nyika ine mativi matatu inogadzirwa nerubatsiro rwe Software uye zvishandiso. Iyi 3D nharaunda inotsanangurwa mukati rakapotsa chokwadi iyo inogona kuwanikwa nemunhu. Iyi 3D nharaunda inogona kuve yevhidhiyo mutambo, mufananidzo kana vhidhiyo. Kushandisa chaiyo chishandiso uye giya munhu anogona kukwanisa kupindirana uye kuongorora iyi-mativi matatu nharaunda uye inova chikamu chekutevedzera chaiko. Anogona kuita zviito, kuona mune chaiyo 3D nyika kana kuita manipulations.
Kune akasiyana magiya akakosha uye simulators ayo anogona kutipa manyepo eiyo chaiyo nyika. Zvakare, kune akasiyana maturusi anogona kushandiswa kuvaka iyo 3D chaiyo nyika. Kugadzira matatu-dimensional nharaunda inonzwika nenzira yakajairika asi inogona kugadzirwa nyore nematanho mashoma uye matipi. Kutevedzera nyika chaiyo nemanzwiro ehuropi hwemunhu ndiko kwakajairika. Kune akati wandei pfungwa uye tekinoroji dzidziso dzakabatsira kuita zvirinani rakapotsa chokwadi nyika.
Zvinokosha zve rakapotsa chokwadi tamba basa rinokosha. Ivo vanotibvumira kunzwa uye kukurudzira pfungwa dzedu uye kutiita kuti tibatanidzwe kune chaiyo nyika. Ngationei zvikamu zvakasiyana-siyana zvakakosha zvezvakanaka rakapotsa chokwadi nharaunda yaunogona kunakidzwa nayo.
Kufarira Virtual Reality? Bata zvichangobva kuitika neBook redu.
Kune akasiyana makambani anoita 3D yakanaka rakapotsa chokwadi mafirimu nemavhidhiyo. Pane zvakakosha kuburikidza iyo yakanaka VR vhidhiyo inogona kuvakwa saka ivo vanotsanangurwa muchidimbu muchikamu chiri pazasi.
Kugadzira vhidhiyo yeVR yakanaka pane michina yakakosha yauchazoda. Vhidhiyo yeVR kazhinji iri vhidhiyo ye360-degree chaiyo. Iwe unozoda michina yakasarudzika iyo inogona kupfura vhidhiyo munzira dzese dzingaite senge kumashure, kumberi, kumusoro, pasi kana mativi ese. Kuti uite vhidhiyo ye360-degree, iwe uchazoda yakakosha kamera seGear 360. Iyo yakakosha kamera yakagadzirirwa neilensi mbiri dzinogona kupfura 360-degree. Asi aya marudzi emidziyo anowanzo ari ekupinda-chikamu chemidziyo. Iko kune cinematic kambani zita Jaunt uyo anotenda kuti vhidhiyo yeVR haifanire kungova 360-degree chete asiwo 3D. Kuti uwane 3D nekamera, iwe uchazoda akawanda kamera akanongedzwa munzira imwechete. Nenzira imwecheteyo, iyo inoshanda nemeso edu, huropi hwedu hunotora imwe neimwe yemifananidzo kubva mumaziso uye ndokuverenga musiyano uripo pakati peboshwe uye ziso rekurudyi, uye inoratidzira munda wekudzika. Nekudaro, kutitaridza iyo 3D chinhu. Kuchengeta izvi mupfungwa Jaunt inovaka yavo 3D kamera inozivikanwa seJaunt imwe. Iyo michina ine makumi maviri nemana makamera ayo anogona kupfura chinhu pane akawanda mativi.
2. Virtual Audio:
Sekuteerera kwevhidhiyo yeVR inova mutambo webhora wakasiyana zvachose munyika yeVR. Kune odhiyo, mic inoshandiswa inonzi TetraMic. Iyi mic ine 4 mics uye nekushandisa chaiyo Software, 4 mics inogona kushandiswa. The Software inoshandisa iyi 4 mics uye inoona panofanira kubva ruzha kubva 360 madhigirii emukamuri. Uchishandisa maitiro aya uye nekuiwiriranisa nekamera iyo inokupa yakazara yakatenderedza ruzha ruzivo, inogona zvakare kuona panofanira kubuda manzwi kubva kumatanho maviri awaka plug munzeve dzako dzekuruboshwe nedzekurudyi. Izvi zvinounza imwe huru matambudziko yekudhirowa vhidhiyo yeVR, chiri chinhu chinoshamisa semushandisi weVR uye chiroto chakazara chemutungamiriri. Chiratidzo chevhidhiyo yakanaka yeVR inoratidzwa neaudio. Audio inofanirwa kunge ichibuda muchinhu chiri 360-degree Kugadzirisa uye kugadzira 3D odhiyo, kufambira mberi zvakanyanya. Software inoshandiswa. Software seCore Sound, VVMic kana Ambisonic ndiyo inonyanya kufarirwa Software inoshandiswa kugadzira VR odhiyo.
3. Kugadziriswa kwemavhidhiyo:
Mushure mekunge mapfuti atorwa kubva kumakamera e3D, danho rinotevera nderekuagadzirisa. 3D VR Software rinowanzo shandiswa kugadzirisa mavhidhiyo aya. Mumakamera mazhinji eVR unogona kutora iyo chaiyo 360-degree footage mune yako Software uye woiisa muchimiro chevhidhiyo rectangular. Iwe unogona ipapo kuona uye kuagadzirisa. Unogona kubvisa izvo zvisingadiwe zvekuwedzera zvausingade muvhidhiyo yeVR. Iwe unogona zvakare kudhawunirodha plug-in iyo inokutendera iwe kuti ufambe-famba ichi chinyorwa mu360 uchishandisa mbeva kana VR musoro. Mushure mekugadzirisa vhidhiyo unogona kugadzirisa odhiyo. Audio idiki diki yakaoma. Kushandisa the Software iwe unogona kunyatso kurekodha odhiyo mune 360-degree maonero uye wozvishandura otomatiki kuita stereo inobuda.
4. Kuona vhidhiyo yeVR:
Mushure mekutora firimu uye kugadzirisa, chinhu chekupedzisira chasara kutamba iyo VR vhidhiyo. Asi kupi kwaungatamba vhidhiyo yeVR? Iwe unozofanirwa kutenga VR headset iyo inogona kuridza iyo VR vhidhiyo. Asi mazhinji emahedhifoni eVR anodhura zvakanyanya. Saka, the famba mafoni ave chiteshi chinotevera kwaunogona kuona iyo 360-degree vhidhiyo. MaSmartphones anogona kushandisa VR app iyo inogona kuita kuti foni yavo VR ikwanise. Iwe unogona kutenga yakachipa yeVR headset uye woishandisa kuona iyo VR vhidhiyo. Unogona kuisa foni yako muVR headset uye unogona kuona zviri nyore VR gutsikana.
Nekudaro, kuvaka yakanaka VR vhidhiyo iwe uchazoda zvakakosha izvo zvinotsanangurwa pamusoro. Zvakare, iwe unozoda nhengo dzakanaka dzevashandi kuburikidza nadzo izvi zvinogona kuitiswa.